Sida ugu fudud ee looga saxiixo dukumiinti Mac | Waxaan ka socdaa mac
Kooxda #PodcastApple Telegram group, dood yar ayaa ka dhalatay sida ay u saxiixan karaan dukumeenti maantana waxaynu eegaynaa sida ugu fudud ee loogu samayn karo Mac-ga. Wararka IPhone waxay hayaan cashar kale oo ku saabsan sida looga sameeyo iPhone ama iPad.
Waxay u muuqan kartaa mid murugsan laakiin runtii way fududahay in lagu sameeyo Mac. Waxaan haysan karnaa saxeexa oo si toos ah loogu kaydin karo Mac-keena si aanaan u saxeexin markasta oo aan doonayno ku hirgeli dukumiinti PDF ah.
Aan ku raacno saxiixa macOS
Way fududahay sida lagu furo dukumiintiga laftiisa «Falanqeyn» oo waxaad aadaa xulashada Qalabka> Sharaxaada> Saxeexyada. Marka aan helno tillaabadan waxaan marwalba adeegsan karnaa isla saxeexan, badalnaa ama ku abuuri karnaa saxiixyo kale Mac si aan ugu isticmaalno dukumiintiyada.
Tallaabooyinku waa kuwa soo socda. Waxaan ku fureynaa horudhac dukumiintiga la saxiixayo oo aan gujino Qalabka> Sharaxaad> Saxiixyada:
Hadda waxa ay tahay inaan sameyno haddii aynaan haysan wax saxiix ah oo la abuuray ayaa abuuraya mid. Tan waxaan u isticmaali karnaa Trackpad, kamarad ama iPhone / iPad:
Si loo isticmaalo iPhone ama iPad waa inaan ku xirnaano isla shabakadda Wi-Fi. Marka saxiixa la abuuro, waa inaan si fudud u galino dukumintiga iyo waxaan hagaajin karnaa cabirkiisa iyo booskiisa si toos ah adigoo gujinaya:
Hadda wixii aan ka tagnay waa inaan u adeegsanno tanna waa inaan gujino astaanta saxeexyada wayna muuqan doontaa. Waan gelineynaa waana intaas.
Runtii way fududahay inaad ku saxiixdo Mac xitaa waad ku dari kartaa saxiixa warqad dhaqameed adoo adeegsanaya ikhtiyaarka kamarada. Waxaad si fudud ku sameysan kartaa saxiixa warqadda, dhagsii kaameradda oo si toos ah ugu qor dukumintiga. Sax ma tahay?
Wadada buuxda ee maqaalka: Waxaan ka socdaa mac » Apple » Tababarada » Sida si fudud looga saxeexo dukumiinti ka socota Mac
Taasi maahan saxiixis dukumiinti. Waxay kudarsaneysaa pdf sawir, haa, sawirka saxeexayaga. Ma lahan ansaxnimo sharci ah maxaa yeelay ma aqoonsana saxeexa, ma dammaanad qaadayo sharafta waxa ku jira isla markaana kama hor tagayso diidmada. Fadlan aan soo bandhigno laakiin aqoon.
Ku jawaab ToVent